Tag: mari inowanikwa » Martech Zone
Tag: yakawanikwa midhiya
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi POE chirevo cheiyo nzira nhatu dzekuparadzira zvemukati. Mepu dzakabhadharwa, Dzakapihwa uye Dzakapihwa midhiya inzira dzese dzinoshanda dzekuvaka masimba ako uye nekuparadzira kusvika kwako munhau dzezvemagariro. Yakabhadharwa, Yakabhadharwa, Yakabhadharwa Midhiya Yakabhadharwa Midhiya - ndiko kushandiswa kwenzvimbo dzakabhadharwa dzekushambadzira kutyaira traffic uye neicho chizere meseji kune yako zvemukati. Iyo inoshandiswa kugadzira kuzivisa, kusvetuka dzimwe nzira dzenhau uye kuita kuti zvemukati zvionekwe nevateereri vatsva.
Pamhepo Kushambadzira terminology: Iyo Yekutanga Tsananguro
Chipiri, Zvita 15, 2020 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Dzimwe nguva tinokanganwa kudzama kwatakaita mubhizinesi uye tinokanganwa kungopa mumwe munhu sumo yezwi rekutanga kana zvirevo zviri kutenderera patinenge tichitaura nezvekutengesa pamhepo. Rombo rakanaka kwauri, Wrike akaisa pamwechete iyi yepamhepo Kushambadzira 101 infographic iyo inofamba iwe kuburikidza ese eanokosha ekushambadzira terminology iwe yaunoda kubata hurukuro neako wekushambadzira nyanzvi. Affiliate Marketing - Inotsvaga vekunze vadyidzani kushambadzira yako
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Tiri kuona shanduko yakanyanya kana zvasvika pakushambadzira kwedhijitari uye iyi infographic kubva kuSmart Insights inoputsa marongero uye inopa imwe data iyo inotaura zvakanaka kuchinja. Kubva pakuona kwesangano, isu tiri kutarisa seanowedzera uye mamwe masangano anotora akasiyana siyana masevhisi. Pave nemakore angangoita matanhatu kubvira pandatanga agency yangu, DK New Media, uye ini ndakarairwa nevamwe vevaridzi veanoshanda kwazvo muindastiri
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Zvemukati zvekusimudzira zvinoenderana nematanho matatu ekutanga - midhiya yakabhadharwa, midhiya ine yavo uye midhiya yakawanikwa. Kunyangwe aya marudzi enhau asiri matsva, ndiwo mukurumbira uye maitiro kune vane uye vakawana midhiya izvo zvachinja, zvichipesana neyakajairika midhiya inobhadharwa. Pamela Bustard, Iyo Media Octopus Yakabhadharwa, Yakabhadharwa uye Yakawana Midhiya Tsananguro Zvinoenderana neMedia Octopus, tsananguro ndidzo: Paid Media - Chero chinhu chinobhadharirwa kutyaira traffic kune yavo
Iyo gumi nematanhatu Yakakurumbira B13B Yemukati Yekushambadzira Tactics
Muvhuro, June 30, 2014 China, July 3, 2014 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Ichi chaive chinonakidza infographic chandaida kugovana kubva kuna Wolfgang Jaegel. Kwete nekuda kwekuti zvinopa ruzivo rwekuti ndeapi marongero ekushambadzira ari kuendeswa nevashambadzi veB2B, asi nekuda kwegap yandinoona mune zvirimo zvirikuendeswa maringe nezvinokanganisa marongero iwayo. Mukurongeka kwemukurumbira, rondedzero iyi ndeyenhau midhiya, zvinyorwa pawebhusaiti yako, matsamba, mablog, zviitiko zve-zvemunhu, nyaya dzenyaya, mavhidhiyo, zvinyorwa
Page 1 pamusoro 3